Ikhabethe eliphakathi kwe-lavender nehlathi e-El Ingenio - I-Airbnb
Ikhabethe eliphakathi kwe-lavender nehlathi e-El Ingenio
El Ingenio, Región Metropolitana, i-Chile
Ikhabethe elimaphakathi nehlathi lendabuko kanye namasimu e-lavender. Kuyindawo eyodwa kanye negumbi lokugezela, indawo ethokomele futhi efudumele eduze kwe-Bosca ebaselwa ngamapulangwe. Izivakashi zinendawo yonke yokuhamba futhi zibe, emakhoneni ngaphansi kwezihlahla ahlome amatafula, izindawo zokosa inyama kanye ne-barbecue. Ihlehlele emuva emgwaqeni, eceleni kwegquma, indawo ilungele ukuphumula futhi ujabulele ukuzola kwezintaba.
I-cabin inazo zonke izitsha ezidingekayo zokupheka: ihhavini, isiqandisi, umenzi wekhofi, i-heater, izimbiza, izitsha, njll ... Itafula elincane eliseduze nangaphandle likuvumela ukuba ube ngaphandle endaweni "eyakhe" ye-cabin. Kukhona njalo izinkuni ezomile kubhasikidi zokukhanyisa i-Bosca futhi kukhona enye indlela yesitofu sikagesi.
I-El Ingenio iseCajón del Maipo, idolobha eliphakathi kweSan Alfonso neSan Gabriel. Ngakolunye uhlangothi lomfula, kude nomgwaqo omkhulu, indawo ethule, enezitolo ezimbalwa zohlobo lwemakethe encane kanye "nokunethezeka" kwe-"El Ingenio" patisserie nama-empanadas, ama-quiches namakhekhe.
Ngisebenza njalo esakhiweni, ngiyatholakala ukuze ngibuze izivakashi kanye nezicelo. Indlu enkulu isebenza ngeminyango evulekile futhi kukhona nenketho yokuhlala ozimele futhi ozimele.
Hlola ezinye izinketho ezise- El Ingenio namaphethelo